“Golayaasha Qaranku Waa In Aanay Ansixin Xeerkasta Oo Ka Hor Imanaya Shareecadda Islaamka.”Warmurtiyeed | Aftahan News
“Golayaasha Qaranku Waa In Aanay Ansixin Xeerkasta Oo Ka Hor Imanaya Shareecadda Islaamka.”Warmurtiyeed
Burco (Aftahannews)- Waxa maanta si rasmi ah magaalada Burco ee Xarunta gobolka Togdheer lagu soo gebo-gabeeyey Shir-beeleed maalmihii u dambeeyey magaaladaas uga socday Beelaha Bariga iyo Galbeedka Burco, waxaana laga soo saaray laba war-murtiyeed oo ay si wadda jir ah u saxeexeen Suldaan Cabdilaahi Cali Muuse iyo Suldaan Maxamed Cabdiqaadir oo ah madax-dhaqameedka hoggaanka u haya labada beelood.
War-murtiyeedyada ka soo baxay shirka ayaa lagu xusay in ujeeddada ka dambaysa qabsoomidda shirka ay gundhig u yihiin Afar Qodob oo lagu kala sheegay inay kala yihiin Turxaan bixin iyo is laabxaadhasho, Dhammaystirka nabada gobolka Sanaag, Horumarinta deegaamada ay labada Beelood wada-degaan iyo Xaalada guud ee Dalka.
Labada War-murtiyeed ee ka soo baxay shirka, ayaa loo kala qaaday laba dhinac oo midkood gaar u yahay shirka iyo qodobbo ka hadlaya xaaladda guud ee dalku xilligan marayo.
War-murtiyeedka ka soo baxay Shirka ee lagaga hadlay arrimaha la xidhiidha danaha labada beelood oo ka kooban Lix Qodob, ayaa u qornaa sidan:-
1) Madaama aynu nahay dad muslim ah diinteena suubanina inoo jidaysay waxkasta oo wanaag iyo maslaxadi ku jirto aakhiro iyo aduunba ayna tahay xalka dhibaato kasta oo haysata bulshadeena lagaga bixi karro,isla markaana distoorkeenuna uu ku salaysan-yahay waa in Xukuumaddu hirgelisaa ku dhaqanka sharaceeda islaamka.
3)In la dhammaystiro wixii ka hadhsan nabadda Gobolka Sanaag ,arrintaasna waxa loo xil saaray guddi ka kooban 21 xubnood oo isugu jira, Salaadiin, Cuqaal iyo waxgarad, guddidaas oo aanay ku jirin ardaayaddii wax kale gaadheen .
4) Waxay labada beelood ay isla qateen in si wada jir ah wax looga qabto horumarinta deegaanada ay wada degaan , sidda, tacliinta,caafimaadka, waddooyinka iyo dhammaan-ba addeegyadda aasaasiga ah ,arrintan waxa loo magacaabay guddi guud oo ka kooban 25 xubnood .
5) Guddiyadda horumarinta ee heer gobol waxa kamid noqonaya beelaha kale ee deegaanka ah.
6) Si loo xaqiijiyo loona taabageliyo go’aamaddan Taariikhiga ah ee ka soo baxay shirkan waxa loo xil saaray guddiyadda labada beelood ah iyo hoggaanka dhaqanka.”
Waxa kale oo ay labada beelood war-murtiyeed ka soo saareen xaaladda guud ee dalka iyo duruufaha ku xeeran, waxaanu u dhignaa sidan:-
Waa in lawada ilaaliyo Qaranimadda iyo midnimada Somaliland
2. Golayaasha Qaranku waa in aanay ansixin xeerkasta oo ka hor imanaya shareecadda islaamka .
Shirku wuxuu ugu baaqayaa Golaha Guurtida inuu ansixiyo Guddidii Culimadda ee distuuriga ahayd .
Si loo waajaho isbadeladda ka socda geeska iyo arrimaha masiiriga ah,waxaanu shirku ku talinayaa in Xukuumaddu wadda tashi mug leh ay kale yeelato,Golayaasha Qaranka, Axsaabta iyo qaybaha kale ee bulshadda, iyadoo la ilaalinayo dastuurka qaranka lana dhawrayo madaxbannaanida iyo midnimadda Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
Xanuunka caalamka ka dilaacay ee (Coronavirus ), shirku wuxuu ku talinayaa in illaahay la tala saarto , ducadda la badiyo taxadar Caafimaadna laga qaato.
Shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan-ba derisyadda nabad ku wadda noolaansho.” Sidaas ayaa lagu sheegay war-murtiyeedka ka soo baxay shirka beelaha Bariga iyo Galbeedka Burco.